Cajiibka Iberis, oo ka tirsan qoyska qallafsan, ayaa si fiican loo yaqaan cidda la yiraahdo sariirta alpine, dabeecadaha dhuunta ubaxa, dhagaxyada. In muuqaal waxay u eg tahay kaabajka iyo dabocase. Iberis waa wax aan qabyo ahayn beerashada iyo daryeelka, sidaas darteed xitaa a gabbalaha casriga ah ayaa qaban kara. Ma taqaanaa?
Noocyada ugu caansan ee dirista
Milkiilaha kasta ee dhismaha gaarka ah ama cottage wuxuu doonayaa in uu qurxiyo sheyga shakhsi ahaaneed ee dhirta ubaxa. Ujeeddooyinkan, waxaad yeelan kartaa wax aan qabyo ahayn, laakiin udbood leh. Waa xaraarad laga sameeyay Spain. Dibedda, waxay u egtahay geed yar oo leh caleemo cagaaran oo qani ah, ubaxsan caddaan, guduud, casaan iyo guduud.
Gobollada koonfureed waxay koraan geedka qurux badan - Magnolia Sulange. Waxaa laga helaa dhammaan waddamada leh jawi diiran. Bloom quruxda qurux badan oo xiiso leh oo ku sugan xasuusta sida mid ka mid ah muraayadaha ugu quruxda badan. Magnolias waxaa lagu guuleystay koritaanka jardiinooyinka botanical on their gaar ah oo kaliya ma aha in xariiqa koonfurta, laakiin sidoo kale dhexda.
Barashada si ay u koraan cotoneaster: beeritaanka, daryeelka, timo
Cotoneaster, oo leh qoyan oo casaan ah, waxay ku koraan shimbiraha Shiinaha, Buryatiya iyo Bariga Siberia. Hase yeeshee, wuxuu ku barbaaray jidadka magaalooyinka, maadaama uu kaliya u dulqaadan Karin, laakiin sidoo kale wuxuu ka jawaabayaa yaraanta gaasaska, boodhka iyo wasakheynta deegaanka. Ma taqaanaa? Cotoneaster waa cufan soo baxa oo si tartiib ah u koraya.
Noocyada beerashada iyo daryeelka ee bakeeriyada dacha
Squash ayaa iska leh qoyska bocorka waana geedo geedeed. Waxaa fiican in la kariyo suxuunta miraha yar yar oo la mid ah dhadhanka zucchini. Noocyada kala duwan ee squash laguma magacaabi karo tiro badan. Farqiga ugu weyni waxa lagu arkay kaliya midabka midhaha iyo muddada bislaado.
Tilmaamaha beeraha iyo daryeelka Mirabilis ee beerta
Ubax Mirabilis uma baahna daryeel gaar ah oo ku habboon beeraleyda aqalka. Iyada oo qiimaha ugu yar, waxaad ku kori kartaa geedka quruxda leh ee kugu farxi doona xilli ciyaareedka oo idil. Sida loo sameeyo si sax ah, waxaan ku sharrixi doonaa maqaalkan. Ma taqaanaa? Caleemaha Mirabilis waa la cuni karaa.
Noocyada caanka ah iyo noocyada kala duwan ee Kryaanka
Si loo fahmo noocyada badan ee Chrysanthemums, ku dhowaad waddan kasta waxay soo saartey qoondeynta u gaar ah. Qoondaynta Botanical waxaa loogu talagalay Chrysanthemums sii kordhaya ee degaannada dabiiciga ah, iyo beerta - si dabiici ah oo la bred. Tixgeli kala soocida chrysanthemums by waqtiga ubax, size ee ubaxa iyo dhererka of asliga ah.
Noocyada ugu caansan ee alstromeriya
Alstroemeria waa ubax dilka ah oo asal ahaan ka yimid Koonfurta Ameerika. Waxaa jira qiyaastii 75 nooc oo dhir ah oo dabiici ah oo dabiiciga ah oo gaaraya ilaa 1 mitir oo dherer ah. Iyo noocyada beeraha, kuwaas oo tiradoodu ku saabsan 200, koraan ilaa 2 m in height. In ubaxyada Alstroemeria gaaro 5 cm dhexroor iyo waxay ka mid yihiin midabyo kala duwan.
Siraha ah ee beerto iyo daryeelidda digitalis
Haddii ubaxa digitalis (digitalis) uu calaamad u yahay dhowr qaybood, ka dibna waxaan dhihi karnaa waa wax cajiib ah, cajiib ah iyo xitaa qarsoon. Hase yeeshee, waxay ku dhex martay nafta kaliya ma aha jilayaasha laga soo xigtay halyeeyada iyo tiknoolajiyada, laakiin sidoo kale bannaanka dhabta ah. Muddo dheer, digitalis waxay noqotay quruxda dhabta ah ee ubaxyada iyo beeraha.
Noocyada ugu caansan ee portulaca
Inta badan jardiinooyinka waxaad ka heli kartaa boobo dhul, oo gebi ahaanba daboolay ubaxyo casaan badan leh, sida haddii lagu daboolo rooga midab leh. Dhirtaas waxaa loogu yeeraa dadka - "mats". Magaca sayniska ee ubaxan waa Portulaca (portulac). Waddankiisa - gobollada kulaalayaasha ee waqooyiga dhexe. Waa wakhti daaqsiin ah, inkastoo ay halkan ku koraan hal sano sababtoo ah ma aha mid loogu talagalay garoomada.
Waxa la sameeyo haddii caleemaha huruud noqdaan ee dieffenbachia, khaladaadka ugu weyn ee daryeelka dhirta
Dieffenbachia - mid ka mid ah dhirta ugu caansan ee gudaha. Sababaha waa cad: waxay u egtahay qurux, si wax ku ool ah u nadiifiso hawada iyo waqti isku mid ah aan qabyo ahayn. Buunadaani waxay ka timaaddaa kaymaha kulaylaha, duurjoogta, waxay udhacdaa awoodda ay u leedahay inay xidid ka samaysato astaamaha taabashada dhulka.
Qeexida iyo astaamaha noocyada kala duwan ee balsa liin
Melissa waxaa loo yaqaanaa sifooyinka dawooyinka tan iyo wakhtiyadii hore. Diyaargarowga ku salaysan dhirta (budada, caleemaha la qalajiyey, saliida) ayaa si ballaaran loo isticmaalaa daawada dadweynaha iyo daawada. Maqaalka ayaa sharraxaya noocyada ugu muhiimsan ee daaweynta kalluunka liin, sifooyinka, sifooyinka waxtar leh iyo isfahamka isticmaalka.
Talooyin ku saabsan daryeelka iyo abuuritaanka rhododendron
Rhododendron waa warshad qurux badan oo qurxoon. Laakiin ma fududa in la koro aaggeenna. Waddanka reer ubaxkan waa Mediterranean, oo ka hadlaya heerkul-gariirka iyo dulqaadka barafka liita. Sidaa daraadeed, si ay dhirtu u qaadato xidid, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la waafajiyo dhammaan shuruudaha tiknoolajiyada beeraha ee saxda ah iyo inay siiyaan daryeel habboon.
Xayiraadda guud ee Noocyada Sawirada
Plectrathus genus, ama Shporotsvetnik, waa wakiil ka mid ah qoyska Labiaceae, isaga oo tirinaya 200 ilaa 400 nooc. Dhaqanka wuxuu ku faafaa gobollada kulaalayaasha kulaylaha iyo kuwa hoosyimaada Afrika, Japan, Australia, Aasiya iyo jasiiradaha Polynesian. Warshadda waxaa lagu daboolay ubaxyo yar oo leh dhexroor aan ka badnayn 1 cm, laga soo ururiyey 6 ilaa 7 gogo 'rasmado ah, guluubka cirridka ah.
Talooyin loogu talagalay beeritaanka iyo daryeelidda Khariidadda beerta
Qalalaasaha basbaaska leh oo lagu daro dabeecada dhirta iyo dhir dhuxusha iyo bogsiinta sifooyinka faafa (kupyrya), beerashada noocan ah ee jardiinooyinkeennu waxay noqdeen caado, waxaa loo adeegsaday karinta iyo daawada Giriiggii hore. Qaar ka mid ah noocyada, dalagga xidid ah wuxuu horumariyaa, astaamaha dhadhanka ah ee ay la mid yihiin parsnips.
Liiska noocyada qorista
Verbeinik waa mid aan caadi aheyn ama dhirta labadii sanno ee laga soo qaaday Qoyska. Waxay noqon kartaa mid ciriiri ama duug ah, iyadoo ku xiran noocyada dhirta gaarka ah. Inta badan caan ka ah Yurub, Aasiya iyo Shiinaha. Waa in la ogaadaa in Loosestrife waa warshad aan qabin oo u dulqaadanaysa hadhka si fiican iyo waqti dheer oo noo farxad leh ubax dheer, taas oo ay inta badan loo isticmaalo naqshadda muuqaalka.
Goobidda iyo daryeellidda beertii beerta
Mid ka mid ah dhirta caanka ugu caansan waa laayl (Laurus nobilis). Caleemaha waxaa si firfircoon loo isticmaalaa beerta wax lagu karsado sida xayawaan jilicsan. Laurel wuxuu ka yimid wadamada Reer Mediterranean. Giriigyadii qadiimiga ahaa waxay soo saareen warshad ku taal xeebta Badda Badda, kadibna waxay bilaabeen in ay ku beeraan dhul furan oo ku yaal gobol diiran oo dalka ka mid ah.
Asal ahaan saxda ah ee magaca Melissa lama caddeeyo sababta khilaafka turjubaanka. Laakiin waxaa la ogyahay in dhirta xayawaanka ee qoyska Youtnotkovye, magaca Melissa, ayaa si ballaaran u faafay sida wax yaryar daawada, sidoo kale loo yaqaan censer, cawska, liin iyo shinni shinni.
Ginger-ka dalka: sida loo abuuro looguna kobciyo galmada beerta
Sifoyinta waxay u egtahay bambo, taas oo ah sababta ay u badan tahay in lagu koray qaybta qurxinta ee beeraha. Laakiin inta badan waxaa loo isticmaalaa sida bahalka, isagoo intaa ku daraya suxuuno kala duwan. Run, sifooyinka bogsashada ee xididka geedka ayaa dhawaan la qiimeeyay. Waxay hagaajinaysaa dheefshiidka, waxay kordhisaa awoodda, xoojisaa xasuusta.
Qodobada maskaxda ee cakta
Cactus - waa dhir aad u xiiso badan, taas oo jecel daaqadaha cawska, kaymaha qalalan iyo xitaa lamadegaanka. Noocyada kasta waa mid u gaar ah oo u gaar ah oo loo isticmaali karaa ma aha oo kaliya warshad ornamental, laakiin sidoo kale si ay u keenaan faa'iidooyin waxtar leh. Maanta, cacti waxaa si firfircoon loo isticmaalaa nolol maalmeedka iyo daawada, labadaba dhaqanka iyo dadka.